Bowers & Wilkins P5 Wireless Ekweisi Review - News Ọchịchị
Bowers & Wilkins P5 Wireless Ekweisi Review
The Bowers & Wilkins P5 Wireless ada oké, anya ezigbo na dị ala maka obere ige ntị sessions. Ha gara ogologo oge iji na-enwe nsogbu banyere odori ha na ndị dịtụ kọmpat maka njem.
Isiokwu a na-akpọ “Bowers & Wilkins P5 Wireless ekweisi review: n'elu-notch ụda nke na-abịa na a price” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Friday 14 August 2015 06.00 UTC
The P5 Wireless bụ British audio emeputa Bowers & Wilkins mbụ Bluetooth ekweisi na magburu onwe ụda ma ọkara butere wireless na njikwa.
Ha na-ele ihe fọrọ nke nta ka yiri ka ụlọ ọrụ ahụ si Wired P5 on-nti ekweisi na na vaguely retro styling gụnyere chromed n'iwu ma nwa akpụkpọ anụ ntị pad.
The on-nti imewe pụtara na ha na-anọdụ na ntị kama n'elu ya siri ike ntị na mpe mpe akwa na ịpị dum ntị gị n'ime akụkụ nke isi gị. Maka obere ige ntị sessions ha bụ ndị ezi ala - ìhè na isi na nọrọ na-etinye - ma aba ege sessions abụ na-egbu mgbu ka ha tuo ntị na-eme ka ha sweaty.
Ọ bụ uru arịba ama na on-nti headphone nkasi obi dịgasị onye onye na site na nke nke ntị ma ị na-eyi iko.
The ekpe ntị cup nwere a microUSB n'ọdụ ụgbọ mmiri n'ihi ibo na a ike mmịfe, nke na-ewepụta na ekweisi n'ime pairing mode ma ọ bụrụ na ẹkenịmde ala n'ihi na a di na nwunye nke sekọnd. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The P5 Wireless ụda n'elu notch. Na ha nwere ezigbo, ahazi ụda na punchy ma ọ bụghị karịrị ha ike bass na ezi ezu ma kewaa ngwá. Ha bụ ụfọdụ n'ime ndị kasị mma sounding on-nti ekweisi m mgbe ntị.
Ụda ha kewapụrụ iche bụ adịghị nnọọ nnukwu. Ihere mkpọtụ na-dulled, ma olu ma sharper ụda n'ụzọ doro anya audible site na headphone ntị iko nke pụtara m na-anọgide na-amanye pụta olu ka mmiri iri ka mụ kwa-aga aga.
Kedu, ọ dịghị wires?
N'ihi ya, anya ihe niile bụ otu ihe ahụ dị ka Wired variant nke P5, ma ya mgbe Bluetooth na playback njikwa abata na Bowers & Wilkins amalite falter.
E nweghị nso-ubi nkwukọrịta (NFC) wuru n'ime ekweisi, otú ha ga-manually paired site na Bluetooth na-a smartphone. Ozugbo paired ha arụ ọrụ ezi ihe ka ukwuu n'oge, ma ha agaghị na-akpaghị aka reconnect ka fọrọ nke nta ka ndị ọzọ nile Bluetooth ọdịyo na ngwaọrụ na-eme mgbe agbanwuru.
Ọ pụtara na i nwere iji aka igwu n'ime Bluetooth ntọala dị na ekwentị na reconnect - na-enweghị isi ole na ole nzọụkwụ nke ndị dị mfe ma na-akụda mmụọ ngwa ngwa.
The playback na olu akara buttons on ntị aka nri cup na-arịa ọrịa kwesịrị ekwesị na ike nke na ekweisi. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The kwusi, igwu egwu ma na olu buttons na-eche ọnụ ala, na enweghi raara onwe ya nye track-Skip buttons bụ ihe na-akụda. Ugboro abụọ na Mmaji Atọ na ịpị play button ite egwú n'ihu na azụ ọ bụghị mgbe nile na-arụ ọrụ nke ọma.
Ndụ batrị bụ mara ezigbo mma, -adịgide adịgide gburugburu 16 awa m ule gụgharia music si a dịgasị iche iche nke smartphones na mbadamba. Nchaji na-ewe awa ole na ole site Micro USB.
The P5 Wireless nwekwara ike-eji na a USB, onye etiyere n'ime ekweisi n'azụ ekpe ntị cup. Na mpe mpe akwa na-ẹkenịmde on site nju, nke jide ya na ọnọdụ nnọọ ike. Ọ bụ a bit fiddly, ma mgbe etinyere ya anya ka waya mgbe niile kwesịrị ịbụ na e nwere.
The ntị iko na-enwe ya n'ebe site nju. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Bowers & Wilkins P5 Wireless eri £ 330 - £ 80 karịrị Wired P5 Series 2 -efu £ 250, na £ 80 karịrị wireless rivals ndị dị otú ahụ dị ka ndị magburu onwe Philips Fidelio M1BT.
Ma ha nwere manụ niggles na-eme na Bluetooth na ịchịkwa, nke ahụ adịghị mma na a ụzọ ekweisi na-efu £ 330. The akpaaka reconnection mbipụta pụrụ ịbụ fixable na a software update, ma enweghị raara onwe ya nye Skip track buttons ma ọ bụ NFC bụ nnọọ ihe iwe.
Uru: ezi nkowa, bass na ntụmadị, na-anọ ogologo oge, ala ruo nwa oge, nọrọ na-etinye on isi, anya ọma
Ọghọm: playback akara buttons na-akpasu iwe, ọ dịghị NFC, ọ dịghị Bluetooth reconnect, oké ọnụ, adịghị n'ogige atụrụ ala
• Ise nke ndị kasị mma Bluetooth ekweisi na-agbaji free nke cables
• icheku Zik 2.0 nyochaa: wireless ekweisi mere site Philippe Starck
Nkeji edemede, Digital music na audio, Ngwa, Nyocha, Samuel Gibbs, Technology
← Iyak mmanụ nwere ike nyere aka gbochie nsogbu ahụike ọgụgụ isi na ndị kasị egbu Ị na-eche echiche ihe m na-eche? Ịrị elu nke uche akara →